Holand oo loo sheegay in aysan qaxootiga celinin - BBC News Somali
Holand oo loo sheegay in aysan qaxootiga celinin
23 Oktoobar 2014
Image caption calaamadda hay'adda xuquuqul insaanka ee Amnesty international
Hay'adda xuquuqul insaanka u dooda ee Amnesty International ayaa dowladda Holland ku eedeysay inay ku xad gudbeyso xeerka caalamiga ah, oo ay Qaxooti Soomaali ah ku celineyso meelaha ay Al-shabaab maamulaan.
Warbixin ay maanta baahineyso Hay'addan u dhaqdhaqaada xuquuqda aadanaha ayaa sheegeysa, in dad qasab lagu celiyo ay sababi karto dhimasho iyo in la dilo, waxayna u sheegtay Xukuumadda Holland inay bedesho siyaasadeheeda ku wajahan dadka ku guuldareystay inay helaan megengelyo.
Marka loo eego warbixintan, dib u celinta Somalida ee meelaha ay maamulaan Al-shabaab ayaa lagu sheegay inay la mid tahay "qof lagu tuuray hoy libaax".
Amnesty International ayaa tixraacday kiiska wiil lagu magacaabo Axmed Siciid, oo Holland tagay asigoo 6 sano jiro, markuu gaaray 26 sano ayey dowladda dalkaasi ku qasabtay inuu dib ugu noqdo Muqdisho.
Bishii May ee sanadkan, Qaramada midoobey ayaa ku boorisay dalalka qaxootiga Soomaalida ah ay ku sugan yihiin, inaysan dadkan ku celin meelaha ay noloshooda halis ku gali karto.